Ngaphakathi kwiXesha le4 le "Veronica Mars" (iNqaku le-2 le-2) -I-NAB bonisa Iindaba ngu-Broadcast Beat, Umsasazi osemthethweni we-NAB Show-NAB BONISA LULA
ikhaya » Okufumaneka » Ngaphakathi kwiXesha le4 le "Veronica Mars" (iNqaku 2 le2)
IVeronica Mars Imiboniso bhanyabhanya uGiovani Lampassi (embindini, umnqwazi oluhlaza) kunye neqela lakhe kwiseti. (© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. Onke Amalungelo Agciniwe.)
Nini IVeronica Mars yaqala ukubakho kwi-UPN ngoSeptemba 2004, uthotho lwalunokubonakala okwahlukileyo, luhlengahlengiso olwahlulahlula kolunye uthotho lweTV lwexesha. Kwimifanekiso yanamhlanje, imibala ephambili yayiyeyona nto ibalulekileyo, kunye nesakhelo sombethe obomvu, iiwellows, greens, blules kunye neeorenji. (Zonke iifestile ezikwi-ofisi yoPhando lweMars zibonakala ngathi zenziwe ngeglasi enombala.) Iiflashboard ezihlala zihleli, kugxininiso lwazo ii-angles eziphantsi ezigqwethekileyo, zahluzwa ngombala omnyama. Oku kujongwa kuqhubekile ngongcelele 'lwamaxesha amathathu okuqala. (Iqela lesithathu lothotho lasasazwa kwi-CW, yathatha indawo ye-UPN kunye ne-WB emva kokuba inethiwekhi ezimbini zidibene ne-CBS.)
Kodwa xa abalinganiswa baphinde babonakala kwi2014 IVeronica Mars Imuvi, babehamba kunye nokubonakala okumnyama, okuncinci. Ukusetyenziswa kombala okungekho ngqiqweni ngabom kwabangela ukuba inkcenkce engaphezulu. (Azisekho iifestile zeglasi kwindawo yokuPhanda iMars.) Le ndlela yokubonakalayo yendalo iyaqhubeka kumdlalo wesine wesine ku-Hulu kwinyanga ephelileyo, kunye noGiovani Lampassi ethatha iimali njengoMlawuli omtsha weFoto. U-Lampasi wayenobubele ngokwaneleyo ukuba angathetha nam ngegalelo lakhe kumboniso nangendlela kwaye kutheni kwaye eyolu chungechunge 'lwendlela yokubonwayo yangoku.
"Ndiqale ukusebenza kwi-1994 yobuchule eSeattle kwiifilimu ezincinci kunye neeprojekthi ezincinci kwisebe lokukhanyisa iseti kwaye ndisebenze ndisebenza njengegcisa eliphambili lokukhanyisa," utshilo uLampassi. Ndaye ndaya los Angeles kwaye, emva kokusebenza kwiifilimu ezinkulu ezinkulu zohlahlo-lwabiwo mali ezineefilimu ezinkulu zemiboniso bhanyabhanya ezinjengoJohn Alonzo (ASC), Peter Levy (ASC, ACS), uGeary McLeod (ASC), noKrishna Rao, ndaqala ngokudubula iiprojekthi ezincinci de ndanikwa. Iqela phantsi, eyaveliswa nguRob Thomas. Yayingulo mboniso undimise njengomdlali we-cinema osisigxina. Ukusukela loo mboniso, ndandiqhubeka nokudubula iinkqubo ezahlukeneyo zeTV, njenge Hleli ubusuku bonke kwaye EBrooklyn Nine-Nine. Emva koko IVeronica Mars ndisonge, ndanikwa Isigidi Izinto ezincinci ukudubula iABC, kwaye ngoku ndiseVancouver ndisebenza kwisizini yesibini yalowo mboniso.
Owona mceli mngeni mkhulu IVeronica Mars Ukuhlawula intlonipho kunye nokugcina uthotho lwantlandlolo ithoni kunye nesimbo, kodwa uphinde uyihlaziye kwaye ubonise ukuba uVeronica wayekhulile. Sikwadubula ukubalwa kwephepha elikhulu, ke ukukwazi ukushukuma ngokukhawuleza, kodwa nokugcina ukubukeka kweklasikhi, kwakubalulekile. Kwakukho iiseti ezazakhiwe ngabom ezincinci kuneseti emiselweyo ukunyanzelisa umlinganiso kaKristen ukuba kwimeko yeclaustrophobic. Ezo seti zazinomngeni ngakumbi kuba ukukhanya kwakusondele kakhulu kubadlali kufutshane. Ukongeza, ngenxa yokuba sakhawuleziswa kwimveliso ngokukhawuleza kwaye sasingaphelelanga kwindawo yendawo, ukukhanya kwezibane zalungiswa ngokuthe ngqo omnye komnye ejonge kwicala elijonge kwicala elinye. ”
Ndibuze uLampasi ukuba kutheni IVeronica Mars layishiya indlela yayo yantlandlolo yesitayile kunye nendlela athe wayiphumeza ngayo imbonakalo emnyama, yokujonga okufihlakeleyo. Esona sizathu sotshintsho yayikukuba, ukujonga amaxesha amathathu okuqala yayiyinto entle I-Veronica Mars, ibibhalwe ngelo xesha elithile ngexesha kunye nobomi beVeronica, ”utshilo. “Ikwajongeka ukuba ilungele ilizwe le-CW. Besifuna abantu bazi xa bebukele ingxelo yangoku, bebona uhlobo olukhulelweyo lweVeronica. Besifuna ukucinezela umbala wombala kunye nokwenza imbonakalo ehlaziyiweyo. Oku kufezekisiwe ngokusebenza kunye nomyili wemveliso uCraig Stearns ukufumana umaleko wombala ongazange uvele kude kakhulu uye waba yimibala egcweleyo. Emva koko siye savelisa imveliso yokugqibela ngokokubala ixesha kwiindawo esifuna kuzo.
"Sisebenzise i-Panavision DXL2 entsha eneglasi yePana TV Vintage Prime kwaye sasebenzisa ii-zoo zePanavision ngabom ezenzelwe ukufanisa iglasi yevini. ndidla ngoku hollywood Iifilitha zoMlingo oMnyama ezineeSofi eziKhulu zokuqaqambisa ukuthamba. Ukukhanya bekungumxube weyunithi ye-tungsten ye-classic kunye ne-Arri S-60's kunye nesiko elenzelwe ukukhanya kwe-LED ngokhanyiso lwe-Custom Entertainment. Isenzi esitsha se-CEL senziwe ukukhanya esivumelekileyo ukuba sibeke izibane apho izibane ezisemgangathweni zazingakhange zilungiswe kwaye zivunyelwe ukuba zitshintshe ngakumbi kumbala, ubukhulu, kunye nokuthamba. Ziyimveliso entle kakhulu kuba zilula kakhulu kwaye zinemveliso enkulu. Ingcali yam yokukhanyisa okhanyayo uLarry Sushinski ukwazile ukuthatha ezi zibane zintsha kunye nezibane zethu ezisemgangathweni kwaye zonke zilawulwa ngebhodi yethu yokukhanyisa; uyenzile lula kwaye iyakhawuleza.
“Sithumele imibala noGareth Cook kwisiseko. Phambi kokuba siye kwimveliso, mna noGareth saba nentlanganiso malunga nohlaziyo IVeronica Mars jonga. UGareth wayewenzile umbala wombala okwintsusa IVeronica Mars, kunye nefilimu yencoko, ngenxa yoko wayeyinto ebalulekileyo ekwakheni indlela esiya kuyamkela ngayo eyasekuqaleni kodwa ke sihlaziye imbonakalo. Ngokwesiqhelo, xa sele ugqityiwe ukugqitywa, uGareth wayedlula okokuqala episode, emva koko ndiye ndangena ndayohlala naye kulungelelwaniso lokugqibela. Siza kusebenzisa iifestile zamandla kwaye sisebenze kunye kumbala wokugqibela kunye nokungafaniyo. Bekumnandi ukusebenza kunye naye kwaye ndityhala inkangeleko. "
Ukususela okuninzi IVeronica Mars ifakwe kwiindawo zokwenyani, bendinomdla wokwazi ukuba iimfuno zendawo yokudubula zahluke njani ekusebenzeni kwisandi. "Zombini zinazo iingenelo zabo kunye nokubuyela umva," utshilo uLampassi. "Ndiyakuthanda ukudubula kwindawo ngoba, kum, imeko-bume yiyo eqinisekisa ukukhanya kwendawo. Isitayile silandela okusingqongileyo, kwaye xa ukwazi ukubamba isitayile seprojekthi ngokudibanela kuphela ngento evumelekileyo indawo, emva koko uyawube uwenzile umsebenzi owenziweyo. Ngumsebenzi we-cinematologist. Kwisandi sesandi, kulungile kuba unokuthi, 'Ndifuna i-8-20ks yeefestile kwaye ndinike ukugcwalisa okucuthayo,' kodwa ulawulo oluphezulu lwesandi. Kwindawo, unokudubula apho isixeko singavumeli izixhobo ukuba zibe khona nakuphi ukukhanyiswa okuza ngeefestile, okanye kuya kufuneka ukhawuleze udubule ngaphambi kokuba litshone ilanga, okanye enyanisweni wenza yehla kwaye kufuneka uyenze ibonakale ngathi yimini, ukuze unyanzelwe ukuba uphucule-kwaye yile nto ndiyithandayo, ukusombulula ingxaki. Omnye umba ubalasele: xa uLogan esiya kwi-City Hall aze abone uParker, oku kudutyulwe ngokupheleleyo ebusuku kwaye ndicinga ukuba siyikhuphe kakuhle. Ekupheleni kosuku, kusafuneka ukuba uzuze imbonakalo yomdlalo, ukuze ukwazi ukubala xa yonke into ingahambanga kakuhle. ”
Njengomlawuli uScott Winant, endenze udliwanondlebe naye kwinqaku lokuqala lolu ngcelele, uLampassi wafumanisa ukuba usebenza naye IVeronica Mars phosa kunye neqela labasebenzi ukuba ube ngamava awanelisayo. "Yonke inkitha kunye neqela labasebenzi IVeronica Mars Sidibane ngokukhawuleza okukhulu-kwimiboniso ethile, kuthatha ixesha lonke lokufikelela kwinqanaba lokuba wonke umntu asebenze ngokudibeneyo-kodwa ndaziva ngathi sonke sidibene kunye ukufezekisa iinjongo zemihla ngemihla ekupheleni kwesiqendu sokuqala. Bendiqala ukuchaza into esiyifunayo okanye efunekayo kwaye umntu endizothetha naye uzokugqibezela isivakalisi sam ngento endiyifunayo.
Ukusebenza ne-cast ibingamava akhethekileyo. Saqala ukubiza uKristen ngokuba 'yunicorn' kuba wayeyazi kwaye ekwazi ukwenza izinto ezininzi. Kunzima ukuyichaza, kodwa ke ebesazi onke la maqhinga amancinci kwaye, engazi nje ukuba sizama ntoni ukufezekisa, usebenze ukusinceda ukuba izinto zenzeke. Ukuba ibingengobuchwephesha bakhe kubuchwephesha basemva kwemidlalo, andiqinisekile ukuba ngekhe sikhuphe ezinye zezinto ebezifuneka siziphumezile.
"Ndinga uthando ukubandakanyeka nelinye ixesha lonyaka UVeronica Mars; zininzi izinto ezingathanda ukuba ndihlasele ngokwahlukileyo. Ndicinga ukuba ndingoyena mntu ugxeka kakhulu, kodwa ukuba bendinalo ixesha lokucingisisa ngomboniso, ngoku ndiyazi into endifuna ukuyicwangcisela enye elandelayo. U-Kristen, u-Enrico, kunye nabo bonke abantu ababedlala indima entle kakhulu basebenza kunye nokubabukela besenza.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli CBS YE I-A-A, Iinkqubo ezahlukeneyo, UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli HULU Kristen Bell Rob thomas Iintetho kunye nemisrya CW I-WB BuTeknoloji I-Ultra HD Forum I-UPN Iinkqubo ezahlukeneyo IVeronica Mars Injini yeVidiyo	2019-08-19
Previous: IziBonelelo zokuSebenzisa inethiwekhi yeMidiya yeHlabathi yoBomi obuPhezulu beXabiso
next: KwiVideo Production Intern